Asomafo Nnwuma 16 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 16:1-40
Paul faa Timoteo (1-5)
Anisoadehu a ɛfa Makedoniani barima bi ho (6-10)
Lidia bɛyɛɛ gyidini wɔ Filipi (11-15)
Wɔde Paul ne Silas guu afiase (16-24)
Wɔbɔɔ nea ɔhwɛ afiase hɔ no ne ne fifo asu (25-34)
Paul kae sɛ ɔman mpanyimfo no mmɛpa kyɛw (35-40)
16 Na okoduu Derbe ne Listra.+ Ná osuani bi wɔ hɔ a ne din de Timoteo+ a ne maame yɛ Yudani gyidini, na na ne papa yɛ Greeceni. 2 Ná anuanom a wɔwɔ Listra ne Ikoniom nyinaa bɔ no din pa. 3 Ná Paul pɛ sɛ ɔde Timoteo ka ne ho kɔ, na Yudafo a wɔwɔ hɔ no nti,+ ɔfaa no twaa no twetia,* efisɛ na wɔn nyinaa nim sɛ ne papa yɛ Greeceni. 4 Bere a wɔnam nkurow no so no, wɔde mmara a na asomafo no ne mpanyimfo a wɔwɔ Yerusalem ahyɛ sɛ wonni so no maa wɔn.+ 5 Enti asafo ahorow no kɔɔ so yɛɛ den wɔ gyidi no mu, na wɔn dodow kɔɔ anim daa. 6 Afei, wɔkɔfaa Frigia ne Galatia asaase so,+ efisɛ honhom kronkron no baraa wɔn sɛ wɔnnka asɛm no wɔ Asia mantam mu. 7 Bio nso, bere a wobeduu Misia no, wɔyɛe sɛ wɔbɛkɔ Bitinia,+ nanso Yesu honhom no amma wɔn kwan. 8 Enti wotwaam wɔ Misia, na wɔbaa Troa. 9 Saa anadwo no, Paul nyaa anisoadehu bi. Ná ɔbarima bi a ɔyɛ Makedoniani gyina hɔ resrɛ no sɛ: “Bra Makedonia, na bɛboa yɛn.” 10 Bere a onyaa anisoadehu no pɛ, yɛyɛe sɛ yɛrekɔ Makedonia, efisɛ yehui sɛ Onyankopɔn na afrɛ yɛn sɛ yɛnkɔka asɛmpa no nkyerɛ wɔn. 11 Enti yɛfaa nsu so fii Troa baa Samotrake tee, na ade kyee no, yɛkɔɔ Neapoli. 12 Na bere a yefii hɔ no, yɛkɔɔ Roma kurow* Filipi+ mu. Ná ɛno ne kurow titiriw wɔ Makedonia mantam no mu. Yɛtenaa saa kurow yi mu dii nna kakra. 13 Bere a Homeda dui no, yɛfaa kurow no pon mu puei, na yɛkɔɔ asubɔnten bi ho, baabi a na yɛn adwene yɛ yɛn sɛ nkurɔfo bɔ mpae. Yɛtenaa ase wɔ hɔ, na yefii ase kasa kyerɛɛ mmea a na wɔahyiam wɔ hɔ no. 14 Ná ɔbea bi a wɔfrɛ no Lidia a ɔtɔn ataade afasebiri* retie. Ná ofi Tiatira+ kurow no mu, na na ɔsom Onyankopɔn. Na Yehowa* buee ne koma mu nyinaa ma otiee nsɛm a na Paul reka no. 15 Bere a wɔbɔɔ Lidia ne ne fifo asu+ no, ɔsrɛɛ yɛn sɛ: “Sɛ moabu me sɛ midi nokware ma Yehowa* a, ɛnde mommra na mommɛtena me fi.” Na ɔyɛe ara ma yɛkɔɔ hɔ. 16 Ɛda bi a yɛrekɔ baabi a wɔbɔ mpae no, abaawa bi behyiaa yɛn. Ná ɔwɔ honhommɔne a ɛma ɔka nea ebesi daakye.+ Ná daakye nsɛm a ɔka no ma ne wuranom nya mfaso pii. 17 Abaawa yi kɔɔ so dii yɛne Paul akyi teɛteɛɛm sɛ: “Nnipa yi yɛ Ɔsorosoro Nyankopɔn+ no nkoa, na wɔreka nkwagye kwan no ho asɛm akyerɛ mo.” 18 Ɔyɛɛ saa nna pii. Afei ɛyɛɛ Paul ahometew, na ɔdan ne ho ka kyerɛɛ honhom no sɛ: “Mehyɛ wo Yesu Kristo din mu sɛ fi ne mu.” Na ɛhɔ ara na ofii ne mu.+ 19 Bere a abaawa no wuranom hui sɛ mfaso a wɔn ani da so abɔ wɔn no,+ wosusoo Paul ne Silas mu, na wɔtwee wɔn kɔɔ gua so kɔmaa atumfo no.+ 20 Na wodii wɔn anim de wɔn kɔɔ ɔman mpanyimfo no hɔ, na wɔkae sɛ: “Saa mmarima yi rehaw yɛn kurow yi paa.+ Wɔyɛ Yudafo, 21 na wɔkyerɛkyerɛ amanne ahorow bi a mmara mma kwan sɛ yedi akyi anaa yɛyɛ, efisɛ yɛyɛ Romafo.” 22 Na nnipadɔm no tuu wɔn ano guu wɔn so. Ɛnna ɔman no mu mpanyimfo no tetew Paul ne Silas ntaade mu, na wɔkae sɛ wɔmmɔ wɔn mmaa.+ 23 Bere a wɔbɔɔ wɔn mmaa pii wiei no, wɔde wɔn koguu afiase, na wɔka kyerɛɛ nea ɔhwɛ afiase hɔ no sɛ ɔnhwɛ wɔn so yiye.+ 24 Esiane sɛ wɔkaa saa kyerɛɛ no nti, ɔde wɔn koguu afiase dan a ɛhyɛ akyiri paa no mu, na ɔkyekyeree wɔn nan bɔɔ dua mu. 25 Na bɛyɛ ɔdasum no, Paul ne Silas bɔɔ mpae, na wɔtoo dwom yii Onyankopɔn ayɛ,+ na na nneduafo no retie wɔn. 26 Prɛko pɛ na asaasewosow kɛse bi sii, na ɛmaa afiase no fapem mpo wosowee. Na ɛhɔ ara na apon no nyinaa buebuei, na obiara nkɔnsɔnkɔnsɔn sanee.+ 27 Bere a nea ɔhwɛ afiase hɔ no nyanee a ohui sɛ afiase apon no abuebue no, ɔtwee ne sekan sɛ ɔrebekum ne ho, efisɛ na ɛyɛ no sɛ nneduafo no aguan.+ 28 Ɛnna Paul de nne kɛse teɛɛm sɛ: “Nyɛ wo ho bɔne biara, na yɛn nyinaa wɔ ha!” 29 Enti okogyee kanea, na ɔde mmirika bɔ wuraa hɔ, na ɔde ahopopo kobuu nkotodwe wɔ Paul ne Silas anim. 30 Na ɔde wɔn baa abɔnten, ɛnna obisaa wɔn sɛ: “Me wuranom, menyɛ dɛn na manya nkwa?” 31 Wɔkae sɛ: “Gye Awurade Yesu di, na wobegye wo nkwa, wo ne wo fifo.”+ 32 Na wɔkaa Yehowa* asɛm no kyerɛɛ ɔne wɔn a wɔwɔ ne fi nyinaa. 33 Na anadwo no ara, ɔde wɔn kɔe kɔhohoroo wɔn akuru anim. Na ntɛm ara wɔbɔɔ ɔne ne fifo nyinaa asu.+ 34 Na ɔde wɔn baa ne fi bɛtow pon maa wɔn, na ɔne ne fifo nyinaa dii ahurusi kɛse sɛ seesei wabegye Onyankopɔn adi. 35 Bere a ade kyee no, ɔman mpanyimfo no somaa awɛmfo ma wɔkɔka kyerɛɛ nea ɔhwɛ afiase hɔ no sɛ: “Gyaa saa mmarima no ma wɔnkɔ.” 36 Ɛnna nea ɔhwɛ afiase hɔ no kaa wɔn asɛm no kyerɛɛ Paul sɛ: “Ɔman mpanyimfo no asoma nnipa aba sɛ minnyaa mo baanu. Enti mumpue mmra, na momfa asomdwoe nkɔ.” 37 Nanso Paul ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yɛyɛ Romafo, ɛnna wɔahwe yɛn baguam+ de yɛn agu afiase bere a wommuu yɛn fɔ.* Afei de wɔrebeyi yɛn kodɛɛ? Daabi! Momma wɔn ankasa mmra, na wɔmmɛfa yɛn mpue.” 38 Enti awɛmfo no kɔkaa nsɛm yi kyerɛɛ ɔman mpanyimfo no. Bere a wɔtee sɛ mmarima no yɛ Romafo no, wɔbɔɔ hu.+ 39 Enti wɔbae, na wɔbɛpaa wɔn kyɛw. Na bere a wɔde wɔn puei no, wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ womfi kurow no mu nkɔ. 40 Nanso bere a wofii afiase hɔ no, wɔkɔɔ Lidia fi. Na bere a wohuu anuanom no, wɔhyɛɛ wɔn nkuran,+ na wofii hɔ kɔe.
^ Anaa “twaa ne dua.”
^ Ná ɛnyɛ kurow a ɛwɔ Italia, nso na kurow no mufo wɔ hokwan titiriw bi.
^ Anaa “aduru kɔkɔɔ a wɔde hyɛ ntama.”
^ Anaa “bere a wonnii yɛn asɛm.”
Asomafo Nnwuma 16